Toetr’andro: misy andian-drahona ahina hivadika rivodoza | NewsMada
Toetr’andro: misy andian-drahona ahina hivadika rivodoza
Tombanana hivadika rivodoza ny tangoron-drahona ao avaratra atsinanan’ny nosy ato anatin’ny roa na telo andro ho avy. Noho izany, arahi-maso akaiky ny fivoarany, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly.
Efa tafiditra aty amin’ny fari-dranomasina Indianina, afakomaly koa ilay rivodoza Kenanga izay niforona tany amin’ny fari-dranomasina indonesiana, tamin’ny 12 ora antoandro, hoy ny filazana manokana momba ny rivodoza. Tany amin’ny maherin’ny 3500 km atsinanan’i Madagasikara no misy ny foibeny. Sokajiana ho tempête tropicale moderée izy ary tombanana hitombo hery hatrany mandritra ny 24 – 48 ora ho avy. Tsy hahakasika an’i Madagasikara ity rivodoza ity ka tsy hisy intsony ny filazana hafa mikasika azy.
Amin’ity herinandro ity, Alizay no mamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara ka ho maina ny andro amin’ny ankapobeny. Momba ny toetry ny andro anio, ny maraina, hanorana tandrifin-drahona ny morontsiraky Melaky, Menabe sy Atsimo Andrefana.
Antalaha, Analanjirofo, Atsinanana. Ho maina ny andro amin’ny faritra sisa. Ny hariva, hahazo orana arahin-kotroka ny faritra Atsimo Andrefana, Anosy, atitanin’ Ihorombe sy Analanjirofo ary Atsinanana. Ho maivana ny orana any Nosy Be Sambirano, ilany andrefan’i Sofia. Ho maina ny faritra tsy voalaza sisa. Ho an’ny maripana voavinavina, 14°C ny ambany indrindra hiseho any Vakinakaratra raha hahatratra 36°C ny ambony indrindra any Antsohihy, Morondava. Hidina kosa ny maripana ambany amin’ny faritry ny afovoan-tany.